Mmanụ dị mkpa maka ọnya - mmanụ dị mkpa n'ahịa | AromaEasy
Ihe na September 25, 2020 July 6, 2021 by Aromaeasy
Nke a bụ ntuziaka dị nkenke nke AromaEasy na mmanụ dị mkpa maka ọnya
Blisters nwere ike na-ewe gị ezigbo iwe ma na-egbu mgbu n'ihi na ha na-eme ka ije ije na ọrụ kwa ụbọchị sie ike. Blisters bụ nnọọ a nsogbu, karịsịa maka joggers ndị mkpa mgbe niile na-ekpuchi sara mbara, dị ka guzobere blisters na-egbochi ha na-arụ ọrụ site na-eme ka agbanwe agbanwe erughị ala.
E nwere ụfọdụ ụzọ ị nwere ike iji belata ihe mgbu metụtara blisters.
Ma nke a bụ ebe mmanụ dị mkpa nwere ike inyere aka! Site n'iji mmanụ ndị dị mkpa, ị nwere ike iwelata ọzịza metụtara ọnya. Mmanụ ndị dị mkpa na-enyere aka mee ka anụ ahụ dị nro na-eke nsogbu dị nro ma belata ọnya ahụ.
Na nke a, ka anyị lelee ụfọdụ mmanụ dị mkpa nke na-enyere aka belata blisters na ụzọ iji tinye ha n'ọrụ.
Ihe kacha mma dị mkpa maka ọnya
Mgbe ị kwuchara nke ahụ, olee mmanụ kacha mkpa maka mmụba? Ndị a bụ ụfọdụ ndị kachasị aka n'ịgba ọgụ na otu ha nwere ike isi nyere aka belata nkụda mmụọ.
Mpekere Mkpa Peppermint
Mpekere pepemint nwere menthol, nke na-enye obi jụrụ, mmetụta dị jụụ. Akụkụ kachasị dị mkpa nke pepemint bụ na ọ na-eweta uru mgbochi mkpali na mgbu. Pepemint Mkpa mmanụ na-enyere ndị mmadụ obibi afọ mgbu, akụkụ okuku ume na stomachaches.
Mara: Gbaa mbọ hụ na ị na-eji pepemint mmanụ dị mkpa na mmanụ ụgbọelu. Pepemint mkpa mmanụ nwere ike ịbụ tingling na obi ọjọọ na anụ mgbe ụfọdụ, karịsịa mgbe etinyere ogologo na-emeghe ọnya dị ka blisters.
N'ezie, mmanụ ndị kachasị mkpa dị mma maka itinye na akpụkpọ gbajiri agbaji na-arụkwa ọrụ nke ọma mgbe etinyere ya ozugbo na ọnya. Mmanụ ndị dị mkpa na-enye anụ ahụ mmiri ma nyere aka mee ka ọnya ahụ dị nro, na-akwọ blisters iji kwụsị ngwa ngwa. Mana olee mmanụ kacha mkpa maka ya? Azịza ya bụ mmanụ osisi tii.
Mkpụrụ osisi tii bụ otu n'ime mmanụ ndị a na-ejikarị eme ihe, dị ka Lavender. Osisi Tea na-enye otutu elele di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche di iche iche.
Ihe dị ukwuu banyere mmanụ osisi tii bụ na a mụọla ya ọtụtụ iri afọ. Na nyocha niile, osisi tii dị mkpa mmanụ achọpụta na ọ dị irè iji belata ọtụtụ nsogbu anụ ahụ, gụnyere ntachu ahụ, ọzịza, ọnya oyi na ọnya n'ezie.
Mkpụrụ osisi tii na-enweta ihe mgbochi microbial na mgbochi fungal. Uru ndị a na-enyere gị aka izere ibute ọrịa na ọnya na-emeghe. Ọzọkwa, mmanụ osisi tii na-enyekwa aka n'ibelata mbufụt, nke na-akpata blisters.
Mix tii osisi dị mkpa mmanụ na obere aki oyibo mmanụ na mmanụ a honeyụ. Mgbe ahụ, tinye ya na mpaghara ahụ metụtara ọnya. Ntụziaka ngwakọta a bụkwa ihe a pụrụ ịtụkwasị obi mgbe ejiri ya na-eme ihe otutu.
Na antispasmodic na mgbochi mkpali, eucalyptus mmanụ dị mkpa nwere ike inye aka belata ncha. Site na ọtụtụ uru nke eucalyptus nwere ike ịnye, anyị na-elekwasị anya n'ihe ndị na-egbochi mgbochi mkpali na nke a. E wezụga akpụkpọ ụkwụ, ihu igwe na-ekpo ọkụ nwere ike ịbụ ihe ọzọ na-eme ka ụkwụ gị zaa. Nke a bụ ebe eucalyptus mmanụ dị mkpa nwere ike inyere aka! Eucalyptus na-enyere aka igbochi ọzịza, nke kpatara esemokwu na okpomọkụ na-akpata ọnya ahụ.
Etu esi eji mmanụ dị mkpa maka ọnya
Anyị ekwuola banyere mmanụ kachasị mkpa maka ọnya, ka anyị gaa n'akụkụ nke ọzọ: otu esi eji ha.
Na-emeso blisters na mgbede
Oge kachasị mma iji mmanụ ndị a dị mkpa bụ na mgbede. Ghichaa obere mmanụ lavender ma ọ bụ mmanụ osisi tii n'ime mmiri na-emegharị mkpịsị aka abụọ. Abalị zuru ezu ga-enye mmanụ dị mkpa oge zuru oke ka akpụkpọ ahụ banye.
Ụzọ ọzọ bụ iji mmanụ dị mkpa n'okpuru plasta. Rịba ama: gbaa mbọ hụ na ị ga -ewepụ akwa nkedo mgbe ị na -alọta ka ikuku dị mma bata na akpụkpọ gị.
E wezụga nke ahụ, ịnwere ike itinye mmanụ dị mkpa iji na-emeso blisters na etiti oge ma ọ bụ n'etiti njem. Ọ bụrụ n'ịchọpụta na ụkwụ gị amalitela inwe mmerụ ahụ, gbalịa ịgbakwunye mmanụ dị mkpa. Ngwakọta na mmanụ ụgbọelu, mmanụ dị mkpa na-enyere aka belata esemokwu na ọzịza. Pepemint mmanụ na-enye obi ụtọ na obi jụrụ enyemaka, na-enyere gị inupụ maka a ole na ole mmezi kilomita!
Ọtụtụ ihe nwere ike ibute ọnya, gụnyere akpụkpọ ụkwụ, ihu igwe ọkụ, ụdị ọsọ mmadụ, wdg.
Ndị a bụ ihe ị nwere ike ịnwale imezi ma ọ bụrụ na ị hụ blisters na-eme mgbe niile.
Agbanyeghị, ị ka nwere ike ịhụ ọnya na-apụta site n'oge ruo n'oge n'agbanyeghị na ị gbalịsiri ike iji gbochie ha. Gịnị ka anyị ga-eme ma ụdị ihe a mee? Naanị tinye obere mmanụ dị mkpa maka ọnya. Ma dị njikere inye ụkwụ gị oge zuru ike iji zuru ike ma gbakee.
Maka ozi ndị ọzọ, biko soro anyị na Instagram & Facebook.